SQL injection ရပြီ !!! ဘာဆက်လုပ်မှာလည်း ? [Article]
Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » SQL injection ရပြီ !!! ဘာဆက်လုပ်မှာလည်း ? [Article]
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 53
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-24
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 36
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 91
ကျနော် TuT ရေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ TuT လို့ထင်လို့ ကြည့်တာဆိုရင် ဒီမှာတင်ရပ်လို့ရပါပြီ။
Security ကို လေ့လာတယ့် လူတွေရှိတယ်။ တစ်ချို့က hacker ဖြစ်ချင်လို့။ လွန်ခဲ့တယ့် နှစ်ပိုင်းကတည်းက online community တွေက Basic TuT တွေဖတ်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်၊ ရသွားရင် အဲလောက်နဲ့ကျေနပ်ပြီး TuT နောက်တစ်ခုထပ်ရှာ လိုက်လုပ်ကြည့်နဲ့ လည်ပတ်နေတယ့် သူတွေရှိပါတယ်။ Knowledge ပိုင်းမှာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ကောင်းပေမယ့် Knowledge တွေကို ဘယ်လို လက်တွေ့မှာ Apply ပြန်လုပ်ကြသလည်းဆိုတာမျိုး၊ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ကို ဆက်လုပ်ဆိုတာမျိုးကြရင် အင် အယ် ဖြစ်ကုန်တတ်ကြတယ်။
ကျနော်တို့ ဒီမှာ TuT တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု စမ်းကြည့်လို့ရသွားရင် ရှေ့ကို ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်းဆိုတာမျိုးလေး စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
ကျနော် လွန်ခဲ့တယ့် သုံးပတ်လောက်က online မှာကြုံခဲ့တာလေးတစ်ခုကို အခြေခံပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ သိတာ တော်တော်ကြာပြီဖြစ်တယ့် ညီတစ်ယောက်က ကျနော့ကို URL တစ်ခုလာ paste လုပ်ပြတယ်။
customer_testimonials.php?testimonial_id ဆိုပြီးမြင်တော့ ကျနော်သိလိုက်ပါတယ်။ milw0rm က OsCommerce component flaw ကြီးဆိုတာ။ ( ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်ဖို့ milw0rm exploit ID 5057 ပါ) OsCommerce ရဲ့ component တစ်ခုက Sql injection flaw ဖြစ်နေတာပါ။ Customer tables က Customer ID ၊ Email ၊ Password အစရှိသဖြင့် ဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Password က MD5 hash အနေနဲ့ ပြတာပါ။
ဘာပြောနေပါလိမ့်လို့ ထင်မယ့် သူတွေအတွက်ပါ။
[You must be registered and logged in to see this link.] Google မှာ inurl:"customer_testimonials.php" လို့ရှာ တွေ့တယ့်ထဲက တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်။ customer_testimonials.php ဆိုတယ့် နေရာကနေစလို့customer_testimonials.php?testimonial_id=99999+union+select+1,2,concat(customers_lastname,0x3a,customers_password,0x3a,customers_email_address),4,5,6,7,8+from+customers/*
လို့ replace လုပ်လိုက်။ /* နဲ့မရရင် -- နဲ့ အဆုံးသပ်ပါ။ ဒါဆို Page မှာ Customer last name, password , email address တွေပြလိမ့်မယ်
သူက ကျနော့ကို အဲဒီလို page လေးတစ်ခုလာပြတယ်။ သူ hack လိုက်ပြီတယ့်။ ကျနော်သူ့ကို ရိုးရိုးလေးပြန်မေးမိတာပါ။ ဘာဆက်လုပ်လို့ရလည်း လို့။ ဒီ username ၊ MD5 hash password ကြီးတွေကနေ ဘာဆက်လုပ်မှာလည်းလို့ ။ သူ 'အင်' ဆိုပြီး ရပ်သွားတာ၊ ခုထိ ကျနော်ကို စကားပြန်မပြောသေးဘူး။ မချီးကျူးပဲ ဘုပြောလိုက်သလိုဖြစ်သွားသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်မေးလိုက်တာကို ဖြေဖို့ သူကြိုးစားနေသလား ကျနော်မသိပါဘူး။
ကဲ ကျနော်အပေါ်မှာ milw0rm ကဟာရော ဘယ်လိုလုပ်လည်းဆိုတာလေးပါပြောထားတယ်။ အဲမှာ password hash တွေကြည့်ပြီး ပီတိမဖြစ်ပါနဲ့။ အဲဒါတွေကို ဘယ်လို အသုံးချမလည်း စဉ်းစားပြီး
ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးကြ ငြင်းကြရအောင်။ ဆက်လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးပါ။
ဆရာတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ လေ့လာတုန်းလူတွေ စဉ်းစားဖို့ပေးတာပါ။
Re: SQL injection ရပြီ !!! ဘာဆက်လုပ်မှာလည်း ? [Article]
on 1st December 2009, 6:09 pm by sHa92
တခြား ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်း ဖိုရမ်မှာ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။
on 1st December 2009, 9:29 pm by xtrm
အဲလိုကြီးကျ ကျနော်ကပဲ ပညာလာစမ်းသလိုလိုဖြစ်နေပြီ $ƴǩǾ
ကျနော်က security professional မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် web security ၊ ကျနော့အလုပ်နဲ့ တခြားစီ။
sp1der ရဲ့ Security team thread က ဒီ post ကိုရေးဖို့ စိတ်ကူးရသွားတာ။ Offensive security၊ အထူးသဖြင့် Web security စိတ်ဝင်စားတယ့်သူတွေ ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက် knowledge ရှိလည်း self-test လုပ်ဖို့ပါ။ အဓိကက အဲ knowledge ကို ဘယ်လို ၊ ဘယ်လောက် apply ပြန်လုပ်နိုင်လည်း၊ ဘယ်လောက် စိတ်ကူးရှိနိုင်မလည်း စမ်းဖို့ပေးတာပါ။ ဒီကရတယ့် information ကနေ ဘာတွေ လုပ်လို့ရမလည်း၊ ဘာအတွက်လည်း၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရနိုင်မလည်း စဉ်းစားကြည့်ရုံပေါ့ဗျာ၊ လုပ်ပြခိုင်းတာမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ စဉ်းစားမိသလောက်ပြောကြရင်တောင် အားလုံးအတွက်လည်း အကြိုးရှိမယ်ထင်တယ်။ အချင်းချင်း idea share တာပေါ့။ မှားရင် ဆရာတွေပြင်ပေးလိမ့်မယ်။ ( ကျနော်တော့ မပါဘူး)
sp1der တို့ nay@zaw တို့ အတွက်လည်း Team အတွက်အကဲခတ်စရာရမလားလို့
TuT တွေရှာဖတ်၊ လိုက်လုပ်ကြည့်ရုံထက် ဉာဏ်ကွန့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ရုံသက်သက်ပါ။
Last edited by xtrm on 2nd December 2009, 9:58 pm; edited 1 time in total
on 2nd December 2009, 2:13 pm by sp1der
security team မှာပါဝင်ချင်တဲ့သူတွေကို အရင်ဖြေစေချင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
google ကနေရှာပြီး ဖြေလည်းရတယ်။
မှားမှာ မစိုးရိမ်နဲ့ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြေနိုင်တယ်။
မှား ဖူးမှ အမှန်ကို သိနိုင်တာမလား??
on 3rd December 2009, 6:42 pm by kyawmin
ကျွန်တော်ကတော့ သိဘူးဗျ ။ စာအများကြီးဖတ်ရအုံးမယ်ဗျာ ။
on 4th December 2009, 4:13 pm by C0D3R
ဒါပေမယ့် Password က MD5 hash အနေနဲ့ ပြတာပါ။
အကယ်ရှ် MD5 သာရမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်မှာလည်းပြောင်းလို့ရတဲ့ဆိုက်တွေရှိပါတယ်
ပြီးတော့ Cain and Able သုံးပြီးတော့လည်းရှာလို့ရပါတယ်
on 5th December 2009, 5:45 pm by sHa92
xtrm wrote: အဲလိုကြီးကျ ကျနော်ကပဲ ပညာလာစမ်းသလိုလိုဖြစ်နေပြီ $ƴǩǾ
အယ်။ အစ်ကိုက ပညာ စမ်းတယ်လို့ ကျနော်ပြောပါဘူး။ နားလည်မှုလွဲသွားတယ် ထင်ပါ၇ဲ့။ ကျနော် စကား အပြောအဆိုမတတ်လို့ပါ။ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကို sp1der က `မှားမှာ မစိုးရိမ်နဲ့ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြေနိုင်တယ်။´ ဆိုလို့ ကျနော် စဉ်းစားမိသလို ဖြေလိုက်ပြီ။
ကိုယ်တိုင်က Hacking ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး။ ဥာဏ်ကလည်း မကောင်းတော့ ပိုဆိုးတယ်။
မေးခွန်းမှာက SQL Injection ရရင်လို့ ပြောတယ်နော်။ ဘယ်လိုရရင်ကို ပြောတာလဲဗျ...
ကိုယ်တိုင် test လို့ vulnerable ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှာလို့တွေ့ရင်လား။
ကိုယ်တိုင်ရှာလို့တွေ့ရင်တော့ အရင်ဆုံး Inject လုပ်ရမယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မှလား..
ပြီးရင် Database ထဲကနေ လိုချင်တာတွေ ယူကြမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား..
Database ထဲက အက်ဒမင် Pw တွေလည်း ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ ရတယ်လေ။
တခြားတော့ ဘာဆက်လုပ်လို့ရသေးလဲ မပြောတတ်။
on 5th December 2009, 11:53 pm by xtrm
SQLi ရရင်လို့မပြောပါဘူးဗျာ။ SQLi တိုင်းမှာ ဘာလုပ်လို့ရလည်းဆိုတယ့် အနေအထားက မတူနိုင်ဘူး။ Site တစ်ခုလုံး box တစ်ခုလုံး owning ဖြစ်နိုင်သလို၊ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်လောက်ပဲ ရတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာ။ Database ဆိုတာ web application မှာပဲသုံးတာမဟုတ်တော့ SQLi ဆိုတာ website တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဖူးဗျ။ အဲတော့ SQLi ရရင် ဘာဆက်လုပ်မလည်းမေးရင် အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် sample situation တစ်ခုပြထားပြီး စဉ်းစားဖို့ပေးတာပါ။ 'ဘယ်လိုရရင်' ဆိုတာ ကျနော်ပေးထားပြီးသားပါ။ ပြန်ဖတ်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
on 6th December 2009, 10:43 am by sp1der
kyawmin wrote: ကျွန်တော်ကတော့ သိဘူးဗျ ။ စာအများကြီးဖတ်ရအုံးမယ်ဗျာ ။
သိသလောက်ပြောပါဆိုမှ မသိဘူးဘဲဖြေနေတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
စာမဖတ်ရသေးလည်း မှန်မယ်ထင်တာကို ၀င်ပြောလို့ရပါတယ်။
(ဝေဖန်ခြင်းသည် တိုးတက်စေလိုခြင်းသာ ကဲ့ရဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ)။
on 7th December 2009, 9:59 pm by kyawmin
bro ကလဲ ၊ တစ်ကယ်မသိလို့ပါဗျ ။ ကျွန်တော်သိတာလဲ အပေါ်ကအစ်ကိုတွေပြောသလောက်ပဲ သိတာပါ ၊ ဒီထက်လဲပိုမသိပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့်မသိဘူးလို့ပြောတာပါ ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျ ။
reply အခုမှပြန်ဖြစ်တာက ကျွန်တော်သိပ်မအားလို့ပါ ။
on 9th December 2009, 3:40 pm by sHa92
သိတော့ဘူး သိတော့ဘူး။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
နဂိုကမှ မတိပါဘူးချို။ တကယ်သိတဲ့သူတွေက ငြိမ်နေလို့ တားက ၀င်ပြောကြည့်တာကိုး။
နောက်ကို မတိရင် မကြောတော့ဝူး။
ခေါင်းခံရတယ် ၊ ကိုယ်မသိတာ လူသိတယ်။ နောက်ဆို ဖြေဘူး။ လာမေးနဲ့။
စတာနော်။ နောက်လည်း အဲလို စဉ်းစားရမယ့် မေးခွန်းကောင်းလေးတွေ များများမေးပေး၊ ကျနော်တော့ ဖြေတော့ဘူး။ သူများတွေ ဖြေလိမ့်မယ်။
on 9th December 2009, 3:54 pm by z3r0c00l
တစ်ခွန်းထဲ ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေလိုက်မယ် မသိဘူးဗျာ။
အကယ်၍များ AWB Bank လိုမျိုး Online Banking နောက်တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ရင် ၊ သူတို့ကလဲ Money Transfer Data တွေကို Sql နဲ့ပဲသိမ်းမယ်ဆိုရင် တော့ Sql Injection ရပြီဆိုရင် .......................................(ဒန် တန့် တန်)
(မှားဖူးမှအမှန်သိမယ်ဆို၍ မှားဖူးအောင် မသိပဲရွှီးကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
on 9th December 2009, 4:52 pm by nay@zaw
တောင်းမြောင်းကြည့်လို့တင် မဟုတ်ဘူ root pw ထိတောင် ယူလို့ရပါတယ် အမျိုး အစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ shell upload တွေတင်လို့ရတယ် ။ sever information တွေ ယူလို့ရတယ် ။
လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပါ ။
on 10th December 2009, 7:51 am by z3r0c00l
nay@zaw wrote: တောင်းမြောင်းကြည့်လို့တင် မဟုတ်ဘူ root pw ထိတောင် ယူလို့ရပါတယ် အမျိုး အစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ shell upload တွေတင်လို့ရတယ် ။ sever information တွေ ယူလို့ရတယ် ။
အဲဒီလို တိုတိုတုတ်တုတ် မဖြေနဲ့လေကိုနေဇ်ာရဲ့။ Photo တွေဘာတွေနဲ့ Tut လေးရေးပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေး လေဖြေပေးလေ။ ဒါမှ သေသေချာချာသိမှာပေါ့။
on 10th December 2009, 1:07 pm by nay@zaw
sqli နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကျနော် မှာ tuto လေးတွေ တော့ရှိပါတယ် ။ ၀ါသနာပါ ကြရင်ကျနော်ပြန်တင်ပေးမှာပါ ။
sql injection ကိုဘယ်လို သုံးလို့ရတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်လို့၇တယ်ဆိုတာတွေလေ တင်ပေးမှာပါ ။ နည်းနည်းတော့ကြာနေပြီ tuto လေးတွေက out of date တော့ဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်